Superfoods: ku xooji cuntadaada cuntooyinkan | Ragga Stylish
Miguel Serrano | | Ku habboon, Nafaqeyn
Ma rabtaa inaad ka buuxiso cuntadaada superfoods? Hadday jawaabtu haa tahay, waxaad timid meeshii saxda ahayd, tan iyo markii aan halkaan kuugu keenayno cuntooyin badan oo kasbaday cinwaankaas sababo laxiriira.
Dad aad iyo aad u tiro badan ayaa ka walaacsan helitaanka qadarka nafaqada ee maalinlaha ah, iyo superfoods waxay caawin weyn u noqon kartaa labadaba si loo hubiyo qiyaas wanaagsan oo nafaqooyin ah iyo in la cuno cunto caafimaad leh.
1 Maxay yihiin cuntooyinka superfoods?
2 Superfoods ee cuntadaada
2.1 Miro guduud
2.4 Shukulaatada madow
2.6 Dhammaan cuntooyinka leh omega 3
3 Ereyga ugu dambeeya
Maxay yihiin cuntooyinka superfoods?
Aynu bilowno bilowga: maxaad u qaadanaysaa cuntooyinka superfoods? Waa maxay faa'iidooyinka ay u metelaan caafimaadka? Maaddaama ay kaa caawinayaan inaad hesho nafaqooyin badan iyo tiro aad u tiro badan, iyo sidoo kale inay yareeyaan jiritaanka cunnooyinka la warshadeeyay (oo dhan cilladaha ay leeyihiin), cuntooyinka superfoods waxay ilaalin karaan jirkaaga.
Qani ku ah nafaqooyinka, cuntooyinkan waxay gacan ka geystaan ​​ka hortagga cudurro badan, oo ay ku jiraan kansarka, kolestaroolka, iyo cudurrada wadnaha. Waxay xitaa ka dhigi karaan maskaxdaada inay sifiican u shaqeyso, xoojinta xusuustaada iyo tanaga xoojinta iyo hubinta in niyaddaadu aysan hoos u dhicin. Haa, saameynta cuntada ee caafimaadka ayaa ah mid muhiim ah, iyo fursadaha cuduro badan oo shaqsi ah ayaa si weyn loo kordhin karaa ama loo yareyn karaa iyadoo ku xiran hadba sida ay u kooban tahay cuntadooda.
Waxa ugu fiicanna waa inaad kaliya tagtaa supermarket-ka kuugu dhow si aad u hesho inta aad rabto. Maxaa intaa ka badan, Maaddaama ay yihiin cuntooyin dabiici ah, dhammaan faa'iidooyinkaan waxay yimaadaan iyada oo aan wax saameyn ah oo ku dhuumaaleysan ku jira caanobooyinkooda..
Superfoods ee cuntadaada
Ma ku jiraan cuntooyin nafaqada badan cuntadayda? Waxaa jira daraasiin iyaga ka mid ah, taas oo ah sababta ay ugu dhowdahay inaad mar horeba cunaysid cuntooyinka superfoods qaarkood, gaar ahaan haddii aad cuntid cunto caafimaad leh oo kaladuwan. Haddii kale, wanaajinta jiritaanka berry, khudaarta cagaaran ee cagaarka ah, miraha dhan iyo digirta ku jirta cuntadaada waa bilow aad u fiican.
Laakiin aan si gaar ah u qeexno: waa maxay cunnooyinka u qalma in loo tixgeliyo cuntooyinka superfoods? Shaki kuma jiro in cuntooyinka ay jecel yihiin buluug, broccoli, miro, isbinaajka, iniinta, saliida saytuunka, shukulaatada madow, toonta, doogga, avokado, ama shaaha cagaaran ayaa buuxiya dhamaan shuruudaha looga baahan yahay. Laakiin maxaa ka dhigaya astaamaha cuntooyinkan loo arko inay ka awood badan yihiin kuwa kale?
Blueberries waa antioxidants iyo anti-bararka, taas oo gacan ka geysan karta yareynta halista ah in ay ku dhacaan cuduro badan. Waqtiga iyaga la cunayo, qiyaastii nus koob maalintii ayaa ku filan. Xusuusnow inaadan qaadin wax badan, dheefahaagu waxay noqon doonaan kuwo aad u cajiiba. Haddii aadan ka heli karin buluug cusub aaggaaga, u gudub qeybta qabow. Buluug barafoobay ayaa la mid ah kuwa cusub. Berry kale ayaa sidoo kale mudan in laga fiirsado, sida raspberries, strawberries, iyo gooseberries.
Ka hortagga dabiiciga ah
Cabitaanka shaaha waxay kordhisaa awoodda antioxidant ee jirka. Noocyada ugu caansan ee shaaha waa cagaar, kaas oo cilmi baaristu ku sifeyso faa iidooyin la yaab leh. Isticmaalka joogtada ah ee cabitaankan ayaa lala xiriiriyay hoos u dhaca heerarka kolestaroolka waxaana xitaa laga yaabaa inuu gacan ka geysto gaabinta koritaanka unugyada kansarka. Haddii aad doorbideyso shaaha madow, waxaad sidoo kale marin u heli doontaa antioxidants badan (waxaa loo arkaa inay ficil ahaan la mid tahay shaah cagaaran).
Fiitamiinno, macdanno, faybar iyo carotenoids. Kuwaasi waa aqoonsiga kale iyo inta hartay ee khudaarta cagaaran ee cagaaran, sida isbinaajka. Natiijada? Khatarta cudurada raaga.
Haysashada gabal shukulaato madow maalin kasta waxay noqotay mid ka mid ah caadooyinka caafimaadka qaba ee moodada. Sirta guusheedu waa antioxidants ay siiso jirka. Xusuusnow in calaamaddu si ay faa'iido u leedahay waa in lagu sheegaa taas kookaha waxyaabaha ku jira waa boqolkiiba 60 ama ka sareeya. Sababta ayaa ah in madowga uu yahay, ay yaraato sonkorta ku jirta.
Kefir wuxuu kuxiranyahay faa iidooyin badan oo caafimaad, laga bilaabo a shaqeynaya nidaamka dheef-shiidka. Waxay sidoo kale hoos u dhigi laheyd kolestaroolka iyo cadaadiska dhiigga. Way fududaan doontaa in laga helo supermarket-ka, kaliya waa inaad hubisaa inaad aqriso maaddooyinka si aysan ugu darin sonkor aad u badan.
Dhammaan cuntooyinka leh omega 3
Cunnooyinka ay ku badan yihiin dufanka omega 3 ee caafimaadka leh waxay u fiican yihiin wadnaha iyo hoos u dhigga kolestaroolka. Waxaa intaa dheer, waxay sidoo kale gacan ka geysan karaan la-dagaallanka dhibaatooyinka kale ee caafimaad, oo ay ku jiraan Alzheimers iyo niyad-jabka. Waxaad ka heli kartaa kalluunka sida salmon, sardines ama mackerel, iyo sidoo kale flaxseed iyo iniinta.
Ereyga ugu dambeeya
In kasta oo cuntooyinka superfoods ay xiiso leeyihiin, Ha iloobin in aan loo baahnayn in la cuno cuntooyin gaar ah si loo gaaro loona ilaaliyo himilooyinka miisaanka, loola dagaallamo cudurrada iyo, sidaas awgeed, cimri dheeri ah. Waana sida ay khubarada nafaqadu kuu xusuusinayaan.
Marka laga reebo cuntooyinka waaweyn, waxaad ku hagaajin kartaa nafaqada aad ku darsaneysaa cuntadaada adoo kordhinaya jiritaanka miraha, khudradda, lowska, digiraha iyo dufanka omega 3 ee caafimaadka qaba. Istaraatiijiyaddani waxay kuu oggolaaneysaa inaad marin u hesho tan nafaqooyinka muhiimka ah ee wada shaqeyn doona si jirkaaga u ahaado mid xoog badan oo caafimaad leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Superfoods
Jimicsiyada kicinta garashada